Ministirri Mummee dhimma Hidhamtootaarratti 'dogoggoraan hubataman' - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Mummee dhimma Hidhamtootaarratti 'dogoggoraan hubataman'
Goodayyaa suuraa Obbo Haayilamaariyaa Dasaalanyi jiddugalli haaraan sadarkaa idli-addunyaa kan eeggate ta'a jedhan
Motummaan Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi ni hiikamu jechuusaa, kanneen sababa siyaasaatiin hidhaman muraasaaf dhiifamni ni taasifamaaf jechuun haaleera.
Gorsaan ministira Mummee akka jedhanitti, hikaaan dogoggoraa akka waan hidhamtoonni siyasaa hundinuu ni hiikamu jedhaniitti akka dogoggoraan hubataman taasiseera.
Kana malees, ministirri Mummee jiddugalli akka lafa dararaatti beekamu, ni cufama jedhaniiru.
Itoophiyaan waggoota dhihoo asi dambalii jeequmsa siyaasaa keessa galuunshee ni beekama.
Dhaabbanni mirga namoomaa addunyaas ibsa jalqabaa simachuun, kunis mallattoo 'dhuma jaarraa bulchiinsa dhiigaan makame kan biyyaatii ta'a,' jedheera.
Garuu cufamuun jiddugala hiidhaa Maa'ikalaawii qofaan isaa taateewwan 'hamoo' achi keessatti raawwatan 'quulleessuu' kan hin dandeenye ta'usaas akeekachiseera.
Akka warra mirgaa namoomaafi gareewwan mormitootaatti, biyyattiin yeroo hunda hidhamaan siyaasaa homtuu akka hin jirree dubbatti.
Ibsa Kamisa darbe waajjira Ministira Mummee Obbo Haayilamaariyaam Dasaalanyiin baheetiin, haala siyaasaa biyyattii fooyyeessuf jecha ''miseensoonni paartilee siyaasaa muraasnii fi namoonni yakka raawwataniiru jedhamuun shakkaman kan biraa ykn kan itti murtaa'e dhiifama ni argatu ykn haaluma qorannoo taasifamutiin dhimmi isaanii adda akka cituu taasifamu'' jedhamee ture.
Garuu namoonni meeqaafi yoom akka gadhiifaman ifaa miti.
Gareewwan gurguddoo keessaa tokko kan ta'e Foramiin Tokkummaa Dimokraasummaa Federaala Ethiopia (Madirak) akka jedheetti, mootummaan yeroo hundumaa yoo 'rakkina keessa galu' tarkaanfiiwwan akkasii fudhachuun 'yeroo bitata'.
Madirak yoo inni dhuguma sirrii ta'eefi mariichi kan filannoo bilisaafi haqa qabeessatti kan geessu ta'e, motummaa waliin marii'achuuf qophii ta'usaa, hogganaa ittaanaan Madirak Dr. Bayyana Phexiroos dubbatan.
Hidhamtoonni eenyu fa'ii?
Gutuu biyyattiitti kan hidhaman rogeeyyii mormitootaa kanneen hiriira mormii motummaa bara 2015-2016 naannoolee Amaaraafi Oromiyaa keessatti gaggeeffameen hidhamaniifi gaazexessitoota motummaa qeeqan kan dabalatu ta'u, riiportarri BBC Emaanu'el Ugunzaa dubbateera.
Akkasumas hidhamtoota keessaa nama lammii UK kan ta'e Andaargaachaw Tsigee, kan bara 2014tti yammu xayyara geeddaratu Yaman keessatti qabamuun humnaan gara Itoophiyaa geeffamees keessatti argama.
Namni kunis sochii siyaasaa isaatiin bakka hin jirreetti murteen du'aa itti murtaa'ee ture.
Namoonni meeqa sababii siyaasaatiin akka hidhamanii jiran beekuun baay'ee rakkisaa ta'a, garuu aanga'oota paartilee mormitootaa dabalatee namoonni gara 1,000 ta'an seera shororkeessumaa jalatti hidhamusaanii ni himama.
Haa ta'u malee, namoonni 5,000 sababii labsii yeroo ariifachisaa baatiii Onkolooleessa bara 2016'tiin qabaman kan hin ilaalamiin jiru.
Dhugumatti gadhiifamuu laata?
Mootummaanis hidhamtoota kanneen, isaan murtii eeggachaa jiran dabalatee, yoom akka gadhiisu yeroo hin keenye.
Goodayyaa suuraa Erga mormiin motummaa irratti taasifamuu eegalee kumaatamni hidhamaniiru
Kan hiikaman taa'uun isaanii kan argamu ta'a.
Haaluma walfakkaatunis dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afriikaa Mosaa Faakii Maahaamat ibsa Ministira muummee kana irratti ibsa keennan yoo ta'u, miseensoota paartilee siyaasaa dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jiruuf kanneen itti murtaa'e akka gadhiifamaniif murtaa'u dinqisiifataniiru.
Motummaan Itoophiyaa kana murteessuun isaafi tarkaanfiin haalli waltajjii siyaasa biyyaattii akka bal'atu taasisuun walta'iinsa biyyaaleessaa uumuuf fudhatamee, gocha ogummaan gutameedha jedhaniiru.
Dura taa'ichis lammileen Itoophiyaa ilaalcha siyaasaa kamiin iyyuu osoo adda hinbahiin dhiifama taasisuufi miira bu'aa tokkummaa biyyaatiin akka fudhataniif waamicha taasisaniiru.
Hidhamtoota siyaasaa hiikuuf murteessuun maal hima?
'Hidhamtoonni siyaasaa' akka hiikaman murtaa'uun dhiibbaa alaatiin miti